ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာအနုပညာတစ်ခုပါပဲ။ စကားလုံးတွေကငါတို့အတွေးတွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေတယ်။ နှုတ်နှင့်စာနှစ်မျိုးလုံးသည်မထင်မရှားဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသံသယမရှိဘဲမှန်ကန်သောအခြေအနေတွင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအနက်ဖွင့်ရန်သုံးနိုင်သည်။ အဘယ်သူ၏အဓိပ္ပါယ်သည်ထုတ်ဝေသူ၏ရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
သံမဏိသည်ဘာသာစကားများစွာနှင့်လူများ၏လူမှုရေးနှင့်ထောက်လှမ်းရေးတို့နှင့်ဆက်နွှယ်မှုများစွာရှိစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စကားလုံးများဖြင့်အမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ဖော်ပြရန်ဘာသာစကားအသုံးပြုမှုဖြစ်သည်။ သို့သော်အသိစိတ်ရှိရှိဖြင့်လုပ်ဆောင်ပြီးမှန်ကန်သောစကားလုံးများကို အသုံးပြု၍ မက်ဆေ့ခ်ျကိုနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ Irony ကဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နားထောင်သူကိုဘယ်တော့မှစိတ်ထိခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဘဝသည်အမြဲတမ်းမလွယ်ကူပါ၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံမထင်မှတ်ထားသောစကားစုများသည်ဟာသနှင့်ဟာသနှင့်ဘဝတွင်အတားအဆီးများရှိသည်ကိုသတိပေးရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကမှန်သည်နေစဉ် အပြုသဘောဆောင်ထုတ်ပြန်ချက် သူတို့ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်မိဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံဤစာပိုဒ်တိုများကိုပြက်လုံးများအတွက်လည်းသုံးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုဖတ်ရှုသူများကြားသည်ကိုမနှစ်မြို့ပါ။ ဟာသဟူသည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ပို၍ ပျော်ရွှင်မှုဖြင့်နေထိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သင့်အားပြုံးရွှင်စေမည့်အောက်ပါမထင်မှတ်ထားသောစကားစုများကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာအဖြစ်မှန်၊ ဟာသဉာဏ်နဲ့အတူ၊ အနည်းငယ်ပို "မှန်" လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမထင်မှတ်ထားသောစကားစုများကိုဖတ်သည့်အခါ၎င်းတွင်ရှိသည့်အစစ်အမှန်အဓိပ္ပာယ်သည်စကားစုကပြောသည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ မဟုတ်လျှင်ဆန့်ကျင်ဘက်သို့မဟုတ်အချို့သည်၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်အဓိပ္ပါယ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ၀ ါကျတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ၊ သင်အမှန်တကယ်ရှိသည့်အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်နားလည်သင့်သည်သူတို့အားလုံးနားလည်နိုင်မလား။ ဟုတ်ကဲ့!
ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်ပြောပါ Yawning ကမင်းပြောတာကိုငါဘယ်လောက်အထိငါဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုပြပေးတဲ့နည်းပဲ။
ငါကငြူစူခြင်းမခံပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကောင်းတစ် ဦး မှတ်ဉာဏ်ရှိသည်။
တစ်ခုခုရှာတွေ့ဖို့သင်ကူညီနိုင်မလား? - ဘာလဲ - မင်းနဲ့အတူငါဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တိုင်း
အကယ်၍ ဤသည်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သည်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုပညာရေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းသည်။
လူအတော်များများကသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာကံကြမ္မာကိုသုံးဖြုန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ရဲ့ဘ ၀ မှာပျော်ရွှင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်လို့ပဲ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထိရောက်ဆုံးအားလျော့စေသောဆေးကို“ ငါတို့ပြောရမယ်။ ” ဟုခေါ်သည်။
ဦး နှောက်ဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ရုံးတက်တာနဲ့အလုပ်မကုန်နိုင်တော့ဘူး။
မင်းရဲ့အလုပ်ကိုမင်းမုန်းသလား အဘယ်ကြောင့်သင်မပြောသနည်း အဲဒီအတွက်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ရှိတယ်။ လူတိုင်းဖုန်းခေါ်ပြီးသူတို့ကဘားမှာတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကြည့်ပါ။
မင်းရဲ့နားလည်မှုအတွက်မဟုတ်ဘဲငါပြောတာအတွက်တာ ၀ န်ရှိတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်စိကန်းနေလျှင် ... အတွင်းခံအဝတ်အစားသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှရေပန်းစားသနည်း။
မုသားနှင့်ပြည့်သောပါးစပ်ဖြင့် "ငါမင်းကိုချစ်တယ်" လို့ပြောတာကရိုင်းစိုင်းပါတယ်။
နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များကစကြာ ၀ universeာသည်အကန့်အသတ်ရှိကြောင်း၊ ငါတို့ဘယ်ကိုစွန့်ခွာသွားသည်ကိုမမှတ်မိနိုင်သောငါတို့အတွက်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » သင့်ရဲ့ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲစေမည့်အီလက်ထရောနစ်စကားစုများ
Karma ဆိုတာဘာလဲ။ သင်ကြဲသည့်အတိုင်းရိတ်ရမည်လော။